Taa Bụ Canbọchị Ọrịa Ọrịa 2020wa XNUMX: Themed "M Ga-emekwa"
Taa Bụ Canbọchị Ọrịa Ọrịa 2020wa XNUMX: Hazie “Abụ M Ga-adị”
Rave News Digest: Lil Wayne kwuru na Ọ bụ onye Naijiria, Tokyo 2020, Iwu Visa Ọhụrụ Na Nigeria + More
EN’afọ a, na Eprel 4, òtù dị iche iche na ndị mmadụ n’ụwa jikọtara ọnụ iji mee ka a mata banyere ọrịa kansa ma na-arụ ọrụ iji mee ka ọ bụrụ ihe gbasara ahụike n’ụwa niile. Canbọchị Ọrịa Cancer E guzobere otu Union for International Cancer Control iji kwado ebumnuche nke Nkwupụta cerwa Ọrịa Ọrịa.
Dabere na American Cancer Society, “a na-atụ anya na nde mmadụ 9.5 n'ụwa nile nwụrụ n'ọrịa kansa n'afọ 2018 - ihe dị ka ọnụọgụ ọnụọgụ 26,000 kwa ụbọchị - a na-ekwukwa na ọnụ ọgụgụ ahụ ga-eto.” Nke ahụ karịrị ọnụọgụ maka HIV / AIDS, ịba na ụkwara nta jikọtara ọnụ.
Isiokwu maka World Cancer Day 2020 bụ "Achọrọ m." Isiokwu a gbara onye ọ bụla ume ịkekọrịta nkwa nke onwe ya iji belata nsonaazụ kansa maka onwe ha, ndị ha hụrụ n'anya na ụwa. Dị ka Healthtù Ahụ Ike Worldwa si kwuo, ọ dịkarịa ala otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ihe niile cancer enwere ike igbochi ikpe. Enwere ike ịgwọta nke atọ ọzọ ma ọ bụrụ na achọpụta ya n'oge ma mesoo ya nke ọma. Ndụ mgbanwe dịka, ịse anwụrụ, ịnọgide na-enwe ahụ ike, ịna-agbasi ike na iri nri kwesịrị igbochi ụfọdụ ọrịa kansa.
Gaa na www.worldcancerday.org iji mụtakwuo gbasara ọrịa kansa site na Canbọchị Ọrịa Cancer nzukọ.
Kedu ihe ị na - eme iji belata ọrịa kansa? Soro anyi kerita aka n’igbe ihe di n’okpuru.
Nke mbụ ebidore Febụwarị 4, 2019
Ihe niile gbasara ọrịa kansa American Cancer Society Abụ M M Ga-eme Na-egbochi Ọrịa cancer Union for International Cancer Control WHO Canbọchị Ọrịa Cancer Canbọchị Ọrịa Cancer ụwa 2019 Nkwupụta Ọrịa Cancer ụwa World Health Organization
Rave News Digest: Paul Okoye na-eyi NCC egwu, Neymar pụọ na PSG, US iji bulie Visa Ban ala Nigeria + More